एकैदिन १४ जनाले कोरोनाबाट ज्यान गुमाए, जम्मा ज्यान गुमाउने २७१ पुगे — onlinedabali.com
एकैदिन १४ जनाले कोरोनाबाट ज्यान गुमाए, जम्मा ज्यान गुमाउने २७१ पुगे
डबली संवाददाता२०७७ भदौं १९ गते
काठमान्डौंै । शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेश बिफिङमा बोल्दै मन्त्रालयका प्रबक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नेपालमा कोरोनाभाइरसबाट थप १४ जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ । आज मृत्यु हुनेहरुमा ४ महिला र १० पुरुष छन् ।
आजको ज्यान गुमाउने सहित कुल ज्यान गुमाउनने संख्या २ सय ७१ पुगेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार आज काठमाडौंका ३ जना महिलाको पनि ज्यान गएको पुष्टि भएको छ । हाल सम्म देशभर एक सय ९७ पुरुष र ७४ महिलाको कोरोनाबाट ज्यान गईसकेको छ ।
त्यस्तै आज नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या १३५९ पुगेको छ । जसमा पुरुष ८९५ रहेका छन् भने महिला ४६४ रहेका छन् । यो सहित अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या ४४२३६ पुगेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले शुक्रबार काठमान्डौ उपत्यकामा थप ४५४ जना सक्रमित थपिएको जनाएको छन् । २४ घण्टामा काठमान्डौमा ३८६ जना , ललितपुरमा र भक्तपुरमा ३२ जनामा देखिएको छ ।
शुक्रबार २४ घण्टामा थप १३५४ जना कोरोना जितेर घर फर्किएको छन् । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या हालसम्म २५ हजार ५६१ पुगेको छ ।
आज कोरोना मुक्त हुने देशका विभिन्न स्थानका अस्पतालबाट भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै सक्रिय संक्रमितको संख्या १८४०७ रहेको छ ।
यसअघि बिहिबार बिफिङमा बोल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले थप ६ जनाको ज्यान गएको बताएका थिए । तीनिहरु २ जना पुरुष र ४ जना महिला रहेका थिए ।
बिहिबार देशभर कोरोना भाइरसका थप १२२८ जना नयाँ संक्रमित थपिएका थिए । जस मध्ये ८३४ पुरुष र ३९४ महिलामा भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको थियो ।
त्यसैगरी बिहिबार काठमान्डौमा थप ४४३ जनामा कोरोना भाईरस संक्रमण देखिएका थिए । ती मध्ये काठमान्डौ जिल्लमा ३५७ जना, ललितपुरमा ४६ जना र भक्तपुरमा ४२ जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले जनाएको छन् ।
बिहिबार गत २४ घण्टामा गरिएको १३ हजार ४१३ पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो । भने ९१७ जना कोरोना भाइरस मुक्त भएर घर फर्किएका थिए ।